Imibuzo evame ukubuzwa - iLinyi Yilibao Household Products Co., Ltd.
Singa umkhiqizi, imboni yethu itholakala eLinyi City, eSifundazweni SaseShandong, eChina. Futhi besilokhu senza imikhiqizo yasendlini iminyaka engaphezu kweyishumi. Imboni yethu inesitifiketi se-ISO9001.
2. Ungangithumelela iSampula ngaphambi kokufaka i-oda?
Uma udinga isampula ukuze uhlole ikhwalithi nezinto ezibonakalayo, ngeluleka ukusebenzisa isampula elincane, kuyingxenye yomkhiqizo owodwa ophelele. Futhiisampula encane imahhala, udinga nje khokha izindleko zokulethwa.
3. Siyini Isikhathi sokulethwa?
Kuya ngobuningi be-oda lakho. Uma inani elincane, imvamisa kungakapheli izinsuku eziyi-7 ngemuva kokuthola inkokhelo. Uma i-oda elikhulu, sicela uxhumane nathi ukuze uthole isikhathi sokukhiqiza.
4. Siyini isikhathi sakho sokukhokha?
T / T; Uma inani elincane, ukukhokha okungu-100% ngo-T / T. Uma inqwaba, ungakhokha idiphozi engu-30% ngo-T / T, ibhalansi engu-70% ngo-T / T ngemuva kokuqeda ukukhiqizwa; Futhi ungakhokha ngokuya ngendlela yakho, sicela uxhumane nathi ngokubonisana.
5. Iyini iPort yakho yokulayisha?
6. Kungani ngikhetha imikhiqizo yakho?
singa khiqiza, Singakunika intengo yefektri leyo ushizirkunenkampani yokuhweba. Ungakwazi izimpahla ezithengisa izinto eziningi ngqo kusuka kufektri yethungaphandle komuntu ophakathi nendawo, izokongela imali eningi. Futhi imikhiqizo yethu yenkampani ikhwalithi ephezulu, kunjaloukuthengisa okushisayo emhlabeni wonke.